Indoda yeVirgo | I-Virgo Men Traits In Love, Ebhedini, Ukuthandana kunye nobudlelwane - Iimpawu Zezodiac
Ukufundwa Kwamakhadi Etarot
Indoda eyiVirgo Iimpawu zayo kuThando, ukuDibana, kunye noBomi
Ke, unamehlo kwindoda eyiVirgo. Kodwa okoko umazi, ungaphantse ufunge ukuba ufana neGemini, iLibra, okanye iPisces kuba unobuntu obunjalo. Nokuba umntu ongamaziyo, obu bumbini busekwe kugqithiso- kukudinwa!
Indoda yakho yeVirgo izisa izichasi ezifana ne-polar kunye ngendlela efanelekileyo kakhulu, yinto nje eyi-kooky. Ngokungafaniyo nendoda yaseGemini eshenxayo isuka kwenye igqithile iye kwenye, indoda ehleli i-Virgo iyakwazi ukudibanisa iimeko ezibonakala ngathi azifani nabantu.
Iimpawu zakhe zothando, ukuthandana, kunye nobomi
Ukwenza njani oku? Indoda eyiVirgo yonke isentloko. Khumbula ibinzana lakhe eliphambili 'NDIYAHLAZIYA.' Ke, indoda eyiVirgo ihlala ibona umfanekiso obanzi xa ikhangela isisombululo sayo nayiphi na ingxaki. Ngandlela thile, unokubona zonke iziphumo ezinokubakho ngaxeshanye kwaye enze esona sigqibo sihle kukhetho.
Umbuzo ngulo, ngaba ungayiphatha le ngcinga izolileyo, epholileyo, kunye nengqokelelweyo- naxa eqala ukuziphatha ngakumbi njengeMad Hatter 'eAlice eWonderland?' Ngenxa yokuba uya kuthi. Kwaye, iyakusebenza kuye! I-LOL Kodwa, ngaba uhambo olugqithisileyo luya kukusebenzela?
IVirgo Man Uluhlu lweziqulatho
Kuthando & Ebhedini
Iimpawu, Ubuntu, Iimpawu
Uyitsale njani indoda yeVirgo
Ukuthandana neVirgo Man
Iinyani, i-Mythology, kunye neMetaphysics
Buyela kuzo zonke iiMpawu zeZodiac
Ngendoda eyiVirgo ebonakala ngathi iyimodeli eyahlukileyo yeGemini Man, akumangalisi ukuba ezi zimpawu zimbini zeZodiac zabelana ngeplanethi efanayo elawulayo enegunya elinempembelelo kwabo bazalwe phantsi kwazo zombini iiLanga Signs, kodwa ngeendlela ezahlukeneyo. I-Mercury yiplanethi enxulunyaniswa nonxibelelwano, kodwa ngakumbi ngokudilizwa okanye ukukhutshwa kwezinto, kuphela ukuzibeka kwakhona kwakhona okanye ukuzikhumbula. Amandla eMercury ngamanye amaxesha angabanda, aphume, apholile, angabinangqondo, kwaye ewe… ahlalutye. Abo bazalwe phantsi koMqondiso weVirgo kwaye balawulwa yile planethi bonwabele iinkalo zesayensi, ukufunda kunye nophando.
Indoda yeVirgo inokuthi ifumaneke igcinwe kakhulu okanye ingenisiwe kwaye ngamanye amaxesha ibonakala ngathi imbi kakhulu. Kwangelo xesha kunye nasekuqhwanyazeni kweliso, indoda eyiVirgo inokujonga okwahlukileyo kwinyani kwaye iyenze ukukhanya ngelixa ihlekisa. Inye into eqinisekileyo, umfo weVirgo uya kukugcina ungcileza, kwaye ukuba ufuna iincoko ezinzulu, ezinengqondo njengohlobo lwakho lwentetho yomqamelo, emva koko indoda eyiVirgo ikulungele!
Indoda eyiVirgo ethandweni naseBhedini
Iqabane elilungileyo lomntu weVirgo lixhomekeke kwelokuba ugqithisile; Ngamanye amaxesha unentloni kwaye wenza njengentombazana enjenge-virgin, kunye namanye amaxesha ufuna ukulahla ukusebenza kunye nokuhlaziya umnqwazi othile wefashoni endala. Amadoda eVirgo afana namaqabane abanzi aneembono ezibanzi kunye nengqondo evulekileyo. Unokumthemba ukuba uguqulela ukugqibelela kwigumbi lokulala njengokuthatha ixesha lakhe esenza uthando, njengoko efuna ukugqibezela ubuchule bakhe okanye ukwandisa umzuzu ngamnye wovuyo kangangoko kunokwenzeka. Ukuthandana ngaphandle kwegumbi lokulala, indoda yaseVirgo ayisiyiyo yonke into ethambileyo kwaye ithambile, kwaye unokufumanisa ukuba wabelana ngothando lwakho nawe ngokukuthengela izipho ezisebenzayo.
Iimpawu zoMntu weVirgo, ubuNtu, ubuGcisa
Ewe, ayinguye wonke umntu weVirgo onokulingana ngokufanelekileyo kwinkcazo esisiseko yeVirgo, kwaye ungazifumana ezi zidalwa zikrelekrele kakhulu zibala i-gamut ukusuka kubukrelekrele obuphezulu ukuze zibonakale ngathi zisasazekile, nokuba inqanaba lobukrelekrele elisondeleyo likho. Ngaphandle kwamathandabuzo, indoda enguVirgo ngulowo unika inyani 'ngobukrelekrele, ubugeza buyalandela.'
Xa indoda yakho yeVirgo ilungelelene, ukhethe ophumeleleyo ngokwenene. Indoda yakho iya kuba nothando olungakholelekiyo kubo bonke abagxeki kwaye ungothuki ukuba usebenza nezilwanyana okanye amaphupha ngokwenza njalo kwixa elizayo. Ewe, uyiVirgo kwaye konke entloko kuhlalutya yonke into anokuyenza ukuze aqiniseke ukuba onke amadada akhe alandelelana. Abanye abantu basetyhini ngokwendalo bathatha lo mnqweno wale ndoda wokulungelelanisa kunye nokuqonda, kwaye abanye banokufumanisa ukuba imeko yayo yohlalutyo iyanyanzelisa kwaye iyacinezela. Usenokudibana nokugxeka kwaye ungothuki kwaphela ukuba umsebenzi wakhe unendlela ethile yoxanduva olunxulumene nokugxeka, nokuba uphonononga iimveliso okanye usebenza njengomgxeki wemovie yephepha lobungcali. Indoda yakho yeVirgo inengqondo ebukhali, enye ineliso elinzulu ngenkcukacha zincinci. Nangona kunjalo, unokuba nengxaki ekufumaneni indlela le ndoda yaseVirgo ebuhlengahlengisa ngayo ubomi bayo kuba inokubonakala ngathi inesiphithiphithi ngaphandle, kodwa kukujonga ngokusondeleyo uyayibona ubuhlakani bobuchwephesha bombutho wayo.
Cinga u-Quicksilver apha, iplanethi elawula iMercury (elinye igama likaQuicksilver), nendlela ababezithiyile ngayo ngaxesha lithile xa besebenzisa iminqwazi xa besenza iminqwazi… yile nto ke ikhokelele kwisifo esinganyangekiyo esibizwa ngokuba yi 'Mad Hatter Disease. Esi sifo siza kunye neempawu ezininzi, kodwa ezimbalwa zeziphumo ebezingalindelekanga uya kuzifumana kwindoda yakho yeVirgo ukuba ayiphelelanga ngaphakathi. Ngenye into, unokucaphuka, angenise, abe neentloni, adideke kakhulu, okanye abonakale enovalo, engakhuselekanga, kwaye izakhono zakhe zombutho ziya kubonakala ngathi ziyingozi kakhulu ngokungathi zonke iimpawu zeVirgo ebezichanabeke kakhulu kwimiphunga ye-mercury, nangona kunjalo akunjalo!
Xa undwendwela ikhaya leVirgo, unokulindela ukuba yonke into icwangciselwe ezona nkcukacha zincinci. Kwaye kungcoliseko olupheleleyo. Yima, yintoni?
Kulungile, oko kubonakala ngathi kukudideka kuwe yinkqubo ehlelwe kakhulu enokuqondwa kuphela yiVirgo eqaqambileyo. Iliso lakhe ngeenkcukacha linayo yonke into ehlelwe ngokweemfumba ezahlukeneyo, iindidi, amaxabiso, kwaye nangona kunjalo uthathe isigqibo sokuzibhala. Ukujonga kwigumbi elinye kwikhaya leVirgo, kwaye unokufumana isitaki samaphepha edesikeni, esinye kufutshane nedesika, esinye ngaphezulu kwekhabhinethi yokugcwalisa, kunye nenye kwitafile yokuphela. Ngelixa oku kubonakala ngathi sisixa se-tad ekufumaneni, ngenene yinkqubo enomdla yombutho kuba iVirgo inamandla omlingo okanye ingqondo yengqondo imazisa indawo ekude yayo yonke into ayigcinileyo.
Ezinye iiVirgos, ngenxa yobume bazo obunobunkunkqele, zinokucwangciswa kakuhle emsebenzini, zikhangeleke zonke iingcali, kunye ne-hoarder ethe tye ekhaya. Lo mthetho usebenza ngokufanayo, apho iVirgo inokuba sloppy emsebenzini kwaye ibe nekhaya elinomgangatho ococekileyo ongayitya kuwo kunye nayo yonke into enendawo yayo echongiweyo. Luhlobo lwamva lweVirgo oluya kulungeleka kumakhaya abantu abathengisa izindlu nomhlaba.
Emva koko sineVirgo yezona zinto zigqithisileyo, umntu ofuna ukuba ilizwe labo licoceke, lingadyobheki, lingatshatanga, lingenabala kwaye lifezeke. Ukuba yaphukile, ikrwitshiwe, okanye ayikhangeleki intsha kwaye ipolishiwe, uyilahla kude. Ukuba indlu ayinuki njenge-bleach, i-chlorine, i-ammonia kunye nephunga alithandayo likaFabreeze, lixesha lokucoca kakuhle kwentwasahlobo, kwaye ngekhe amoshe mzuzwana elungisa izinto zokubuyisela imeko yakhe emsulwa, engangxengwanga.
sagittarius umfazi kunye aries ukuhambelana kwendoda
Impilo kunye nokuba sempilweni
UVirgo ulawula amathumbu, udakada, amathumbu kunye nesisu, kwaye oku akumangalisi ukuba sijonga inyani yokuba indlela yokwetyisa ayisiyiyo kuphela ukuhanjiswa kwezondlo ngendlela enocwangco, kodwa ikwasusa inkunkuma kunye neetyhefu zomzimba. Kuba inkqubo yokwetyisa iwela phantsi kolawulo lwalo mqondiso, iVirgo inokufumana umzabalazo wokugcina ibhalansi kwindawo yokugaya. Ukutya okunempilo kunye nokusetyenziswa rhoqo kweprobiotic kunokunceda ekupheliseni imiba ethile yokwetyisa. Eminye imiba yezempilo enokuthi ivele ibandakanya ukunganyamezelani kwe-lactose, ukunganyamezelani kwe-gluten, ukutya komzimba, ukunganyamezeli kwe-insulin (isifo seswekile), kunye nemicimbi yokulawulwa kwamathumbu.
Indoda yaseVirgo iya kufuna ukusela amanzi amaninzi kwaye itye ngokwaneleyo ifayibha enyibilikayo ukuze ifumane ukutya kwindawo efanelekileyo yokusebenza. I-Virgo egqithileyo, efuna ukuba umzimba uhlale ungahlanjwanga, ucocekile, ungangcoliswanga kwaye uyincopho yempilo unokubeka ugxina olunzima kukuphila usempilweni. Ukuya kwelinye icala, umntu unokuba yi-hypochondriac. Onke amayeza okuphilisa endalo abhenela kwindoda enguVirgo, enobudlelwane nendalo, kunye nokusebenza kukaJoh-rei, okanye ukuveza iVirgo kubuhle bendalo njengobugcisa kunye neentyatyambo zinokusebenza kakuhle njengemo yokuphilisa, nkqu nakoyena mntu amadoda.
Umsebenzi kunye neMali
Nawuphi na umsebenzi onxulumene nezakhono zombutho ngowona msebenzi ulungileyo kwindoda yeVirgo. Uyakuthanda ukwabelana ngolwazi, ke usebenza kakuhle njengomlingane okanye umqeqeshi okanye isikhokelo. IVirgo ihlala ihlonipha abantu abadala kunye nabasemagunyeni. Akunjalo malunga nokuzinyusa, iVirgo ifuna ukusebenza ngaphakathi kweyunithi ukuzisa umsebenzi weyunithi kwimpumelelo kunye neziqhamo. Isiqhelo sinqwenela nguVirgo obona isenzo esiphindaphindayo njengenxalenye yombutho.
Indoda yakho yeVirgo inokwenza umatshini weemoto obalaseleyo njengoko injalo malunga nezinto zikwindlela elungileyo kunye nokusebenza. Unokumfumana esebenza njengengcali yeenkonzo, okanye unokulandela umsebenzi apho anokusebenzisa khona izakhono zakhe zohlalutyo ezimangalisayo, njengonontlalontle okanye isayikholoji. I-Virgos zibalasele kulawulo lwemali nazo, kuba le yinto anokuyihlalutya rhoqo, njengemakethi yesitokhwe kunye nendlela yokutyala imali. IVirgo igcina iliso elinobuqili kwimali ihlala ilungiselela umhlala phantsi kunye nekamva.
Ukuba ufuna ukubhena kwiVirgo kungcono nenze isenzo kunye. Uyabathanda abantu ababhinqileyo abalungelelaniswe njengaye kwaye ukuba ubeka isiphithiphithi, isiphambeko, okanye vibes ezixineneyo, uya kumtyhalela ngaphandle kwebhola yakho. Indoda eyiVirgo ifuna umfazi oodidi onokuthi abe secaleni kwakhe, umntu ongacocanga kwaye acoceke kangangoko, nokuba ungumfazi onamava- iVirgo ikhetha nje umoya wobumsulwa.
NgeVirgo yonke isentloko yakhe injengomntu onomhlaza kwigobolondo lakhe, kuya kufuneka wenze umsebenzi othile wokumenza aphume kwaye azame nokuba sesichengeni kunye nawe. Uya kuba neentloni kwaye abe neentloni xa kuziwa ekubeni nolwalamano olusenyongweni. Nje ukuba uyiphumelele intliziyo yakhe, kufuneka uhlale uthembekile, kuba indoda eyiVirgo ayithathi kancinci ukukrexeza kwaye kungenzeka ukuba ulahlekelwe nguye ukuba awuthembekanga kwaphela. Ngokunjalo, uya kuthembeka kuwe, kwaye unakho ngokupheleleyo ubomi bonke, ukuzibophelela kwiqabane elinye.
I-Virgos iyakonwabela ukuququzelela izinto, ke iipuzzle zenza ikhefu elibi. IVirgo ithathela ingqalelo ukucoca kunye nokulungiselela ukonwaba, kwaye bayathanda ukwenza izinto ezithatha iinkcukacha ezininzi. Iimodeli zemoto, ukuchwela kunye nokwakha izinto, ukudibanisa izinto kunye nokufunda: Ezi zizinto ezimnandi ezonwabelwa yindoda yaseVirgo. Kusenokwenzeka ukuba abe ngumtshutshisi kwezempilo ukuze ufumanise ukuba uyaligqitha ixesha lakhe ejimini esebenza. Ukuthanda kwakhe izilwanyana kunokuba kuye ngokuzithandela kwindawo yokuhlala yalapho.
Indoda yaseVirgo ilindele ukuba wonke umntu aziphathe kakuhle kwaye indlela yokuziphatha ekrwada ithathwa njengengamkelekanga. Akabamkeli abantu abathanda ukuqaqamba okanye benze ngokungathi ilanga liyaphuma lize liye kutshona emagxeni abo. Indoda yaseVirgo xa icinga nzulu ayithandi ukuphazanyiswa ngexesha lemibuzo yayo yokufuna inyaniso, kwaye iyabadelela abo bangazibambeli phezulu iiperile zobulumko azifumeneyo ebudeni bohambo olunomphefumlo.
Indawo engcolileyo ayamkelekanga kwiVirgo, kodwa loo nto ayithethi ukuba ukungalungelelaniswa kwayo kuthathwa njengokungcola, ngokuchaseneyo sisiphithiphithi esinocwangco kanye njengoko kufanele ukuba: Ihlelwe ngendlela yeVirgo. Indoda yaseVirgo izimele ubukhulu becala kwaye ayizimisele ukwamkela uthando okanye inceba.
Umdlalo oGqibeleleyo woMntu weVirgo
Utata onguVirgo ngoyena ubakhathaleleyo abantwana bakhe, kodwa akayikhuphi imvakalelo kubo ngokubonisa uthando. Indoda eyiVirgo ivakalelwa kukuba kufuneka ifundise abantwana bayo uxanduva kunye nokuziphatha okwamkelekileyo ukuze baphumelele eluntwini kwaye kungoko ngezi zifundo evakalelwa kukuba uthando lwakhe ngabantwana bakhe lubonakaliswa ngcono. Ulumkile ngezimali zakhe, ungumnikezeli olungileyo kwaye uceba nezicwangciso zengxowa mali yekholeji yomntwana kwasekuqaleni kobomi bomntwana. Uzisa ndawonye izitayile zobuzwilakhe kunye nemvume yokuba ngumzali ukwenza ibhalansi yoqeqesho oluphezulu kunye nokuguquguquka okuthile njengomzali.
Njengomhlobo, indoda enguVirgo ngulowo uzinikeleyo kwaye uthembekile. Wenza ubuhlobo nabo banobukrelekrele obuphezulu kwaye uhlala exhomekile nabantu abadala kunaye ngenxa nje yobulumko abaye bayifumana ngamava aphilayo. Ungumntu onencoko emnandi, kodwa, efana neHermit kwiTarot, uchitha ixesha elininzi yedwa kwilizwe lakhe efuna eyakhe inyaniso. Ukuba uyakuvumela ukuba ungene kwilizwe lakhe labucala ungazibona unethamsanqa, ukwenzile oko.
Amadoda eVirgo ngabantwana abaziphethe kakuhle ngokukodwa abafane bazibandakanye nakweyiphi na ingxaki ebalulekileyo. Bahlala bezizilumko ngaphezulu kweminyaka yabo kwaye abanakudlala noontanga babo bobudala obufanayo, njengoko begcuma kukuziphatha okungakhathali nokungakhathali… hayi, indoda yakho yaseVirgo ithatha ubomi ngendlela ebaluleke kakhulu kunaleyo, kwaye iyakubonisa ukuhlangana kosapho. nokuzinikezela kwakhe kusapho.
Umfazi we-aquarius kunye nendoda ye-taurus ebhedini
Amadoda eVirgo ayahambelana namaqabane eVirgo njengoko zombini zihlalutya ngokulinganayo kwaye zilungelelaniswe kwaye izinto abazilindeleyo kwigumbi lokulala ziyafana. Indoda eyiVirgo inokuphinda ihlangane neqabane laseTaurus elinothando ngobuhle kunye nobugcisa, ngelixa iVirgo inothando lombutho kwaye izinto zikulungelelwano olufanelekileyo. I-Capricorn iyahambelana neVirgo njengoko iCapricorn ibuyiselwe umva kwaye iyaqondakala. Nokuba iScorpio ibonelela ngezinga elifanelekileyo lokuhambelana neVirgo, njengoko imiqondiso ibonakala ngathi iyancedisana ngokulula.
I-Libras, ngelixa imalunga nokulingana, yenza njengokuchitha imali, kwaye oku kunokucaphukisa imali eyiVirgo. Kwangokunjalo, uLeos ungqubana nobuntu bendoda yeVirgo kuba iLeos kufuneka ibalasele kwaye iiVirgos azinakuyimela loo nto. I-Aries, ekubeni iyonke malunga nesenzo, intshukumo, kunye nokuhamba okungagungqiyo kunokucima ukungcangcazela okungcungcuthekisayo okuphelele kulungelelwaniso oluchanekileyo, oluneenkcukacha ngeVirgo Male.
I-Gemini kunye neVirgo banokukwazi ukuvana kakuhle, kodwa amathuba okuba bobabini bazokwazi ukufikelela kwisivumelwano kuyo nayiphi na into ngokulula: I-Geminis igqithile kwaye iVirgos izama ukuzisa izinto ezibaxiweyo kunye, ke oku kufana nokuxuba ioyile kunye amanzi. Abanye bathi iiPisces ziyahambelana neVirgo, kodwa oku nako kuyathandabuza, ngaphandle kokuba kukho isingqisho esihle phakathi kwesidingo seVirgo sokuba wedwa kunye nokufuna inyaniso kunye nePisces ngamanye amaxesha ezihlala zikhona.
I-Astrology kunye neZipho zeZodiac
NgeeVirgos zibaluleke kakhulu, ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukuthenga izipho; Cinga ngendlela ejongeka ngayo indlu yabo ukuba ucwangcisa ukuthenga izinto zasekhaya. Ngaba kukho ukuphindaphinda ukuthengwa kweempawu, okanye isikimu sombala esikhulayo? Nika ingqalelo kwiinkcukacha ezincinci iVirgo ihlawula, kwaye kungekudala uza kufumana isitshixo sokuthenga izipho kwiVirgo exakekileyo. Izinto zombutho ezinje ngabacwangcisi, iincwadana zokubhala, iijenali, iialbham zeefoto, kunye nayo nayiphi na into enxulumene neendlela ezifanelekileyo zokugcina zizipho ezilungileyo zeVirgo ngokunjalo. Mhlawumbi indoda yakho yeVirgo inokusebenzisa isipaji esitsha okanye ibrifkheyisi entle. Ukuba uhamba, qwalasela umthwalo kunye neendlela okanye uququzelele izinto zakhe.
Umqondiso weVirgo unxulunyaniswa neqela leVirgo esibhakabhakeni kunye namabali kaDemeter kunye nentombi yakhe iPersephone evela kwiintsomi zamaGrike, kunye neCeres kunye neProserina kwiintsomi zamaRoma. Ngamanye amaxesha olu phawu lunxulunyaniswa noJustitia ngokunjalo, kunye nezikali zokulinganisela. Into enomdla kukuba, olu nxibelelwano lukhomba kunina nakwimeko yobuntombi boothixokazi kuwo omabini la matyala, ngaloo ndlela ebhengeza ukungaziphathi kakuhle, iindlela ezigabadeleyo kodwa ezifanayo zokuziphatha kweVirgo Man uqobo. Unako ukukhulisa kodwa abe yedwa njengoko ekhusela yena, kwaye unokuzisa ezona zinto zichaseneyo kunye ukuza nezisombululo ezintsha, xa kufanelekile.
IHermit inxulunyaniswa nomqondiso weVirgo: Lo ngumboniso womntu olumkileyo ofuna inyaniso ebambe ukukhanya njengoko eqhuba uphando. NjengoHermit oya entlango eyedwa ukuya kufuna inyani, Indoda eyiVirgo kungenzeka ichithe ixesha elininzi entlango yengqondo yayo ikhangela iinyani zayo kunye nokuqonda kwayo. Xa iHermit ifumene inyani, ulinda abanye abazimiseleyo ukuba bafunde inyani ukuba bafune isikhokelo sakhe, kuphela emva koko uya kuthi ancede akhanyisele umenzi-ndlela. Kwiphepha elifanayo, xa iVirgo Man inesityhilelo okanye i-epiphany, ayinakubhengeza ngaphandle ukufumanisa kwayo de umntu abonakalise umdla owaneleyo wokulandela oko akuqondileyo njengenyaniso.
Kwangelo xesha, iplanethi elawulayo iMercury idibanisa iVirgo neMilingo. Ukuba sijonga iHermit ngulo ufumanisa ulwazi, singabiza uMlingo ukuba asebenzise ngobulumko ulwazi alufumeneyo. Ngeengcinga kunye nokulungelelaniswa, kungoko kuphela apho ukubonakaliswa okwenzekayo emzimbeni kwenzeka khona.
KwiNumerology, inani lesihlanu liphinda lihlangane neVirgo. Iintlanu zimele i-pentacle, i-enzonzobileni, into engekhoyo, kodwa ikwangoyena ndoqo wokuba yintoni umlingo; Ngomoya, ingqondo, ukucinga, intando, kunye nolwalathiso lwentando yokuba umlingo wenzeke. Inani lesihlanu linxulunyaniswa nokuhamba ngokukhawuleza, ukucinga ngokukhawuleza, kunye nabantu abathanda ukucinga ngokukhululekileyo abafuna ulwazi. Xa ulungelelwanisile inani lesihlanu liphinda lenze kwiVirgo limenze aphendule, akhathalele, azimisele, kwaye azivelele, kodwa ngokungalunganga, inani lesihlanu linokuvela kwiVirgo njengokungabikho kobungqongqo, ukuqina, ukucinga ngokungaguquguqukiyo, ukungazinzi nokungakhathali okanye ukubanda Isimo sengqondo kunye nokungakhathali.
I-Chakra ehambelana neVirgo yingcambu yeChakra okanye iMuladhara. Kubonakala kungaqhelekanga ukuba iVirgo yohlalutyo ophezu kwentloko yakhe ecinga ngalo lonke ixesha anganxulunyaniswa ne-Root Chakra.
Yabona, i-Root Chakra ikwabizwa ngokuba yi-Base Chakra. Le Chakra ikufutshane emhlabeni kunye nomhlaba - kubonakala ngathi ikude ne 'Crown Chakra' okanye 'intloko yeVirgo'. Kodwa le oxymoron inokuqondwa ukuba sibona ukuba ixesha elininzi elichithwa yiVirgo entlokweni yalo liziphatha ngendlela yohlalutyo, kokukhona iya yahluka ngokwasemoyeni. Njengoko iVirgo ichitha ixesha kude nomoya, kokukhona igxile emzimbeni iya iba.
Imihla yeVirgo: Nge-22 ka-Agasti-Septemba 22
Uphawu: Intombi Enyulu
Glyph imvelaphi yegama lokuqala. Ubume be-'M 'buchazwa njenge' ntombazana, 'kwaye umjikelo ophelileyo ujongwa njengendawo ebiyelweyo, inqanawa, okanye abanye bacebisa ukuba imele imilenze yenyulu, eyintombi, eyintombi enyulu.
IsiSanskrit: IKanyā, ethetha 'Intombi Enyulu.'
Ibinzana eliphambili: Ndiyahlalutya.
Ulawulo lwe-anatomical: Amathumbu emathunjini kunye nesisu, ngakumbi eyona mimandla isezantsi
Izilwanyana: Unomatse kunye noMqhagi
Iphupha leArchetype: Intombazana, iNtombikazi eyiNtombikazikazi, uMama, uthixokazi wokuVuna
Umgangatho wokulinganisa: Umbono wehlabathi owandisiweyo, ingqondo evulekileyo, kunye nembono ebanzi
Iintaka: Magpie, isikhwenene
Amatye okuzalwa: I-Peridot okanye i-Emerald
Umthi weCeltic wenyanga: Umthi weHazel (Agasti 5-Septemba 1) kunye noMdiliya (ngoSeptemba 2-Septemba 29)
Intsingiselo yoMthi weCeltic: Ukwazi konke kunye nokungaQikelelwanga
I-Chakra: Ingcambu okanye iManipura
Iwele lamaTshayina leZodiac: Umqhagi
Ukuhambelana: ITaurus, iCapricorn
Ingxaki: IJupiter (yakudala), iNeptune (yangoku)
Amawele amaTshayina amaZodiac amawele: Umqhagi
indoda ethandanayo ethandana nomfazi we-taurus
Ukuphakanyiswa kwePlanethi: Imercury
Ukuwa: IVenus, uMhlaba
Izithixo Zabafazi: UIsis (Aset kwinkangeleko yakhe yobuntombi), uCeres, Athena, Minerva, kunye neNtombikazi enguThixokazi uPele.
Intyatyambo: ILavender, iMadonna, iMagnolia, Ingqolowa, iFennel, iNarcissus, iValerian, iCornflower kunye noLily.
Ukuphilisa Amakristali: IHyacinth, iagate, iGreen Jade, iPeridot, iAquamarine, iTourmaline, iOvaline, uJasper, iDayimane kunye neCornelian.
Amakhambi: Ingcambu yesilivere, ikhephu, irosemary, i-narcissus, kunye ne-cornflower.
Igama elingundoqo: Umsebenzi
Izithixo zamadoda: Imercury kunye neHermes
Isinyithi: IPlatinam, Ngokukhawuleza
Isandi soMculo: Isitshixo se-E
Inani lokungcangcazela: 5
Oyile: Intlaka yokuqhumisa, iBerggamot, iSarmarm, iLavender, iOakmoss, iPatchouli, iMelissa, iFennel, iCypress kunye neClary Sage.
Impembelelo kwiplanethi: Imercury (yakudala), iCeres (yangoku)
Imibala yokuqala: Indigo
Imibala yesibini: Imibala emnyama, engacacanga. Imifuno, i-ocher, i-orenji emnyama, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka / imibala yegolide kunye ne-brown.
Isidingo saseprayimari: Ukuvelisa kunye nokusebenziseka
Ivumba: Inyibiba yeNtlambo, iLavender, kunye neLilac. I-Snowdrops, i-lavender, i-cornflower, i-caraway kunye ne-asters.
Umbutho wamaxesha: Ihlobo
Imibutho yeTarot Card: IHermit, uMlingo
Imithi: Umdala, uHazel
Abantu abadumileyo: UMichael Jackson, uAdam Sandler, uJimmy Fallon, uBernie Sanders, uAndrew Lincoln, uKeanu Reeves, kunye noCharlie Sheen.
Umfazi we-leo kunye ne-taurus indoda iyahambelana ngokwesondo
kuqhubeka ntoni ngeenkwenkwezi namhlanje
Indoda eyi-aries kunye ne-pisces woman ngokwesondo
zithini iindlela ezine zekhadinali